Indlela yokufaka Ubuntu kwi-Android terminal | Ubunlog
USergio Agudo | | Ubuntu, Ifowuni yeBuntu
Iifowuni zokuqala ngefowuni Ubuntu iya kuba yinyani namhlanje, kodwa ngokuchanekileyo kuba uninzi lwethu selufikile asisayi kuba nesixhobo esiqhuba inkqubo yokusebenza njengomgangatho njengoko kubonisiwe namhlanje. Nangona kunjalo, into esinokuyenza ukuba nje sinesiphelo se-Android esihambelanayo faka iROM yenkqubo kuzo.
Ngalesi sikhokelo esiza kukunika sona namhlanje uya kuba nakho faka Ubuntu Ifowuni kwi-Android yakho, kodwa ngaphambi kokwenza oko sicebisa izinto ezininzi: Jonga uluhlu lwe izixhobo ezixhaswe ngokusemthethweni, ze izixhobo ezixhaswe luluntu, Landela la manyathelo esiza kukubonisa wona, ube neekopi zokulondoloza yonke into kwaye ucace gca malunga nento oyenzayo.
Okokuqala, kufuneka kucace ukuba isikhokelo esiza kukunika sona siyilelwe ngokukodwa ukufaka iROM ngaphakathi izixhobo ezifumana inkxaso esemthethweni. Ukuba awunayo enye yezi zixhobo, isikhokelo esihambelanayo sayo kufuneka sivele kuluhlu lweetheminali ezixhaswa luluntu.
Enye into ekufuneka uyazi kukuba ukufaka Ubuntu kwifowuni kuya kubandakanya ukulahleka kwedatha kwisiphelo sakho, kodwa emva koko siza kukunika izixhobo zokwenza ikopi yogcino lwento yonke onayo kwisiphelo sendlela usebenzisa imiyalelo yeADB.
1 Lungisa i-desktop
1.1 Ukuqwalaselwa kwe-ADB kunye ne-Fastboot
2 Ukugcina i-backups ze-Android
3 Ukuvula i-bootloader
4 Ukufaka ifowuni ka-Ubuntu
Okokuqala kufuneka siqinisekise ukuba indawo yokugcina izinto iyasebenza, kuba iphakheji ekuya kufuneka siyifakile iqulethwe kuyo. Nje ukuba siyenze, kuya kufuneka kuqala yongeza Ubuntu SDK PPA. Sivula i-terminal kwaye songeza oku kulandelayo:
Ke sihlaziya uluhlu lwezinto zokugcina:
Into elandelayo ekufuneka siyenzile faka iphakheji ubuntu-device-flash. Ukwenza oku kwisiphelo sendlela senza lo myalelo:
Ukwazi bhetele esinokukwenza ngale phakheji sinokuhlala sihlala yiya kwiphepha lomntuNgokuchwetheza oku kulandelayo kwisiphelo sendlela:
Oku kulandelayo faka iphakheji phablet-tools. Ngale nto siphinda sibuyele kwisiphelo sendlela:
Singafumana Uluhlu lwezixhobo ezifakiwe kuyo ngalo myalelo:
Singafumana isixhobo soncedo kule phakheji kunye nesiguquli -h, umzekelo:
Ukuqwalaselwa kwe-ADB kunye ne-Fastboot
Xa ufaka iphakheji ubuntu-device-flash izixhobo ezimbini zongezwa esiza kuyisebenzisa kakhulu kwesi sikhokelo: i-ADB kunye ne-Fastboot. I-ADB yibhulorho phakathi kwesiphelo kunye nekhompyuter esivumela ukuba sisebenze kuyo ngetheminali xa ibethwe ngokupheleleyo, kwaye i-Fastboot ibonelela ngoqhagamshelo lwe-USB xa isixhobo sikhutshiwe bootloader.
Sincoma jonga kumaphepha oncedo kwezi zinto zimbini usebenzisa le miyalelo mibini yokufumana okuninzi kangangoko:
Ukugcina i-backups ze-Android
Oku inokwenziwa ngeendlela ezimbini: Ukuba sele unayo bootloader kuvulwe kunye ukubuyiswa kwesiko ukufakela ungahlala usenza indawo yogcino ngokusebenzisa i Ukubuyisela onokuyibuyisa kamva ngendlela efanayo. Ukuba awunaso nasiphi na isixhobo sokubuyisela esifakiweyo, kuya kufuneka kuqala uye kuseto lwe-Android ukwenza imowudi yophuhliso.
Ngale nto kwaye ukuba awuzange uyenze, kuya kufuneka uyenze yiya kwicandelo Malunga nefowuni kwaye ucinezele inombolo yokwakha ngokuphindaphindiweyo kude kube nomyalezo ofanayo !! Siyavuyisana !! Sele ungumakhi!. Emva koko ukhetho lophuhliso luya kuvela, kwaye apho unokuvula imo yokulungisa imeko ye-USB.
Xa uyisebenzisile unako qhagamshela ngentambo ye-USB oko kuyakusinceda ukuba sakhe ibhulorho yeADB. Ungajonga ukuba unxibelelwano lube yimpumelelo usebenzisa umyalelo kwisiphelo sendlela ekufuneka ibuyise into enje:
Nje ukuba sikwenze oku, emva koko sinokuqhubeka gcina ikopi yogcino kwi desktop yethu Yonke into efakwe kwisiphelo sethu se-Android, esinokuthi siyisebenzise ekubuyiseleni isiphelo sendlela yethu ukuba Ubuntu Ifowuni ayisiqinisekisi. Apha unayo ifayile ye- Indlela yokubuyisela i-Android inikezwe yi-Canonical, kodwa nangona kunjalo siza kuzama ukunikezela esinye isikhokelo kuyo kamva.
Ukwenza isipele kufuneka sebenzisa lo mthetho ulandelayo Kwisiphelo:
A umyalezo njengogcino oluya kwenziwa kwifowuni yethu kwaye iya kusibuza ukuba sifuna ukuyigunyazisa. Sithi ewe.
Ukufakela nayiphi na iROM, makube yile ivela ku-Ubuntu okanye isiko elivela kwi-Android njengeCyanogenMod, kunjalo le nto ifuna ukuvulwa. Ukwenza oku ukusuka kwisiphelo sendlela kufuneka siqale ngokutsha isixhobo kwifayile ye- bootloader. Ngale nto sisebenzisa lo myalelo ulandelayo:
Siya kwazi ukuba sikwi bootloader xa sibona umfanekiso Android ilele ngomqolo iphaneli yayo yangaphambili ivulekile. Emva koku sijonga kwakhona ukuba isixhobo sixhumeke kakuhle, kwaye ukuba yonke into ihamba kakuhle kufuneka sibone iziphumo ezinje:
Into elandelayo kukusebenzisa myalelo wokuvula ifayile bootloader ngomntu ngamnye:
Siza kubona isikrini semigaqo kunye neemeko ekufuneka sizamkele ukuze siqhubeke. Kubalulekile ukuba uyazi ukuba ukuba siyayivula ifayile ye- bootloader siza kuphulukana newaranti yomnxeba. Emva koku siza kuphinda siqale kwakhona kwi-Android, siya kuba siphulukene nedatha yethu kwaye kuya kufuneka singenise olona lwazi lincinci ukuze sigqibe ukuqala, ukusukela xa sifaka Ubuntu yonke loo datha iya kulahleka kwakhona.
Ukufaka ifowuni ka-Ubuntu
Ukufaka Ubuntu Ifowuni kuqala kuya kufuneka cima isixhobo. Nje ukuba siyenzile, kuya kufuneka siqale kwakhona ngokucinezela indibaniselwano yesitshixo echanekileyo ukuyenza ngendlela fastboot. Kuba sisebenzisa indlela yezixhobo ezixhaswe ngokusemthethweni, sinokubuyela kwi Isikhokelo esipapashwe nguGoogle ukuyenza ngendlela eyiyo.
Into elandelayo ukufaka iROM, kwinto ekufuneka uyenzile khetha ijelo. Ukuthatha, umzekelo, sisebenzisa i-Nexus 7 kofakelo lwethu, singasebenzisa ijelo phucula. Ngenxa yoku kuya kufuneka singenise umyalelo kwisiphelo sendlela ubuntu-device-flash, kwaye iziphumo esiza kufuneka sizifumane ziya kuba yinto enje:
Ngokumalunga neliphi ijelo oza kulikhetha, iCanonical ithumele ifayile ye- isikhokelo sokhetho lomjelo ngokwecebo lethu, kuba yindlela ekufuneka sichonge ngayo imifanekiso. Esi sikhokelo kungaboniswana ngaso Indawo yokuphucula Ubuntu.
Xa ukufakela kugqityiwe ifowuni iya kuqala kwakhona, kwaye ngaphambi kokwenza nantoni na kufuneka ulinde Ukuqalisa kwakhona kugqityiwe. Kwiimeko ezininzi, akukho unxibelelwano lwabasebenzisi olufunekayo, kwaye siyaqaphela ukuba kunokuthatha imizuzu embalwa. Ngokubhekisele kuhlaziyo lwenkqubo, izaziso zokufumaneka kwazo kufuneka zifike ngokuzenzekelayo.
Kwaye ukuza kuthi ga ngoku isikhokelo sethu sokufaka ifowuni ye-Ubuntu kwifowuni ye-Android. Sithatha eli thuba ukugxininisa ukuba ngale ndlela yofakelo Siza kususa iROM ye-Android ngokupheleleyo; ayisiyo izihlangu ezimbini. Ukwenza ufakelo lwezixhobo ezibini esiya kuphuhlisa esinye isikhokelo esiza kupapasha kuso kwi-Ubunlog.
ukuba fumana ulwazi olongezelelekileyo Ngokumalunga nokufakwa kwenkqubo ungaya kwi Isikhokelo esipapashwe yiCanonical.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Ifowuni yeBuntu » Indlela yokufaka Ubuntu kwi-Android terminal
Umyalelo wokugqibela endicinga ukuba awuchanekanga: subuntu-device-flash –channel = devel –bootstrap
USergio Agudo sitsho
Ngoku ndiyayilungisa, enkosi ngegalelo.
Phendula uSergio Agudo
Ngaba inokufakwa kwinqaku le-2? Enkosi
Phendula uMiguel ingelosi
izinzile kangakanani ubuntu ngoku? Ngaba unazo izinto ezisisiseko ezinje ngesaap? ubuso?
i-terminal ayiboni isixhobo endisenzayo kwimeko enjalo)
ULuis Armando sitsho
Kuya kwenzeka ntoni ukuba ndiyifaka kwi-lg l5x optimus kuba ingabonakali kuluhlu lweefowuni
Phendula uLuis Armando
yesu gonzalez sitsho
molo kwenzeka ntoni ukuba ndiyifaka kwi-htc umnqweno 510 engekho kuluhlu
IKIKE MTZ sitsho
KAKUHLE, NGABA UKHO UMNTU OYAZI UKUBA NDINGAYIFAKA KWI-IPHONE 4S YAM? KWINCWADEKO KUFUNEKA USEBENZE NGOBA ZONKE ZINESIBONELELO KUNYE KODWA NDICINGA UKUTHI INTO ENGEKHO KULUHLU: \_: \_ NCEDA UNCEDO, NDIFUNA UKUZAMA IFONI.
Phendula KIKE MTZ
Ngaba inokusebenza kwi-bq aquaris e4?
Molo ungandixelela ukuba ndingayifaka kwi-htc evo 4g cdma
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba uyayixhasa i-gapps?
Unako kwi-cocktail ye-touch eyodwa (4.5
i-rodrigo spada sitsho
Molo, umbuzo wam ngowuphi kumnyele wasamsung osebenzayo.
Ndine-Samsung galaxy s3 mini I8190L, ine-1GB yenkunzi yegusha kunye ne-5 yememori yangaphakathi.
Le nkqubo yokusebenza iza nokufumana kwakhona ii-androids.
Ndifuna ukuyivavanya kule fowuni kwaye ngubani othi ungowokuqala weS3 kwihlabathi kunye nenkqubo yabo.
Jonga iimpawu ngokubanzi ukuze undenze umRoma nceda.
Ndiyathanda ukwenza iifowuni zibe zezakho.
Enkosi kakhulu kwangaphambili kwaye ndilindele impendulo yakho ngesikhokelo sokufaka esipheleleyo.
Phendula kwi-rodrigo spada
umyalelo Sudo apt-fumana ukufaka ubuntu-isixhobo-flash
USteven Galarza sitsho
Mva kwemini inokufakwa kwi-moto g 2013
Phendula uSteven Galarza
Unokufakwa kwi-Sony Xperiast21a
emilio valencia sitsho
Ngaba Ubuntu ifowuni ingafakwa kwi-S3 Mini?
Phendula u-emilio valencia
UAlayn Cuervo Ravelo sitsho
Ndingafaka Ubuntu kwiHuawei yam inyuka ngeY221
Phendula kuAlayn Cuervo Ravelo
Ndingafaka Ubuntu kwi-SAMSUNG SMARTPHONE GALAXY GRAND PRIME PLUS, ngaba iya kuxhaswa luluntu okanye i-canonical
Phendula Manuel Ramirez
Molo emva kwemini, ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba yeyiphi xa ndifuna ukuyitshintsha ithebhulethi yam (lenovo yoga kunye no-3) ukuya kubuntu? ngalo lonke ixesha ndizama ukufikelela kwingcambu, iyayeka ukuphendula ngokunika i-adb ukuqala kwakhona i-bootloader ukuba bayandinceda njengomzali kungcono kakhulu kuba icoca lonke ulwandiso lwabantwana, kwaye bafunda izinto ezingaphezulu, baxolele ukuphazamiseka, kwaye enkosi kakhulu kwangaphambili
UWalter Lacuadra sitsho
Ngokuhlwa okuhle kungavavanywa kwi-C60pillar S617 octa-core Snapdragon 3, XNUMXgb yenkunzi yegusha
Phendula uWalter Lacuadra
Ungasibala njani isahlulelo se-NTFS kwi-boot ezimbini ezine-Windows 8